Unesco World Heritage Luang Prabang chiitiko chenjodzi inouraya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Unesco World Heritage Luang Prabang chiitiko chenjodzi inouraya
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Laos Kuputsa Nhau • nhau • Resorts • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Vashanyi veChinese ve13 vafa mushure mekunge bhazi richivaendesa kuguta rekushanyira Luang Prabang muLaos rakatadza kubatika. Mukuwedzera, vashanyi makumi matatu nemumwe vari kurapwa. Chinese state media yakaratidza mapikicha evanunuri vachipfuura nemumakumbo emvura.
Tsaona dzemumigwagwa muLaos, Thailand, Cambodia, neMyanmar zvakajairika, nemitemo yekuchengetedza inowanzo putswa uye vateereri vemitemo vashoma.
Mwaka wemononesi kubva munaChikumi kusvika Gumiguru unonyorovesawo migwagwa yekumaruwa nemvura inonaya inogadzira mamiriro ekutsvedza.
Vashanyi veChinese vakakosha kuLaos uye vanosvika vakawedzera 13 muzana muhafu yekutanga yegore rino.
Luang Prabang iguta reWorld Heritage. Guta iri riri kuchamhembe kweLaos pakati penzvimbo ine makomo. Iro guta rakavakirwa pane peninsula yakaumbwa neMekong uye rwizi rweNam Khan. Makomo emakomo (kunyanya makomo ePhouThao nePhouNang) anotenderedza guta mune green green.